Felix Goody Bag Cat Na-emeso Ngwakọta Mbụ 60G | Nzipu ahia otu ubochi - Lewisham Felix Goody Bag Cat Treats Original Mix 60G– Ordrs
Felix Goody Bag Cat Na-emeso Original Mix 60G
Enweghị ihe ọ bụla na-enye ọnụ karịa atọ nke ihe ụtọ na-atọ ụtọ juru n'ime akpa dị ụtọ, nke mere na anyị ji n'aka na pusi gị ga-ahụ FELIX® GOODY BAG Original Mix with Chicken, Liver & Turkey flavored cat treat. Mee ka nwamba gi nwee obi uto nke toki, ọkụkọ na imeju na nri ọ bụla, na-erite uru site na nri niile anyị gụnyere na ọgwụgwọ anyị. Ikwanye obere akpa ma lelee pusi gị ka ọ na-agba ọsọ na ụda nke anyị FELIX® GOODY BAG Original Mix cat na-emeso. Enweghị ihe ọ bụla na-enye ọnụ karịa atọ nke ihe ụtọ na-atọ ụtọ juru n'ime akpa dị ụtọ, nke mere na anyị ji n'aka na pusi gị ga-ahụ FELIX® GOODY BAG Original Mix with Chicken, Liver & Turkey flavored cat treat. Mee ka nwamba gi nwee obi uto nke toki, ọkụkọ na imeju na nri ọ bụla, na-erite uru site na nri niile anyị gụnyere na ọgwụgwọ anyị. Ikwanye obere akpa ma lelee pusi gị ka ọ na-agba ọsọ na ụda nke anyị FELIX® GOODY BAG Original Mix cat na-emeso. Enweghị ihe ọ bụla na-enye ọnụ karịa atọ nke ihe ụtọ na-atọ ụtọ juru n'ime akpa dị ụtọ, nke mere na anyị ji n'aka na pusi gị ga-ahụ FELIX® GOODY BAG Original Mix with Chicken, Liver & Turkey flavored cat treat. Mee ka nwamba gi nwee obi uto nke toki, ọkụkọ na imeju na nri ọ bụla, na-erite uru site na nri niile anyị gụnyere na ọgwụgwọ anyị. Ikwanye obere akpa ma lelee pusi gị ka ọ na-agba ọsọ na ụda nke anyị FELIX® GOODY BAG Original Mix cat na-emeso. FELIX® Goody Bag - nwere ngwungwu a na - apụghị ịgbagha agbagha, nke na - agwakọta anụ nke anụ ahụ jupụtara na isi ọma, ụtọ na - atọ ụtọ. na omega 6 fatty acids iji nyere gị aka ịkwado pusi gị. Ejiri ọkụkọ, umeji na toki. Ngwakọta dị iche iche nke anụ ahụ jupụtara na-esi ísì ụtọ na textures na-adọrọ adọrọ. Na atọ irresistible flavors ọ bụla akpa, ha na-Triple na-emeso !. Tọrọ ụtọ textures na irresistible flavors juru n'ọnụ na a adaba goody akpa gị cat na-enwe. A na-atọ ụtọ arụkọ anụ ụlọ maka ụmụ nwamba ndị okenye. FELIX®.